बालसंसार–अनौठो कुरा | Ratopati
रङ बदल्ने र एकैचोटी दुईतिर हेर्न सक्ने जीव छेपारो access_timeपुस २२, २०७७
भाइबहिनीहरु तिमीहरुलाई छेपारोको बारेमा थाहा छ होइन ? ल भन त छेपारो के का लागि चिनिन्छ ? अंग्रेजीमा Chameleon (केमिलियोन) भनिने छेपारोका १७१ प्रजाति पाइन्छन् संसारभरि। प्रजातिमा विविधता जस्तै यिनको आकारमा पनि बड़ो विविधता हुन्...
मानव शरीरका अनौठा तथ्यहरु access_timeफागुन २४, २०७६
0 विश्वका ४६ प्रतिशत व्यक्तिहरुको रगत ‘ओ’ ग्रुपको रहेको हुन्छ ।0मानव शरीरमा सबभन्दा लामो शिरा ‘तल्लो भेनाकाभा’ (Inferior Venacava) हो । त्यसले म...
रोचक रमाइला तथ्यहरु, पढेर तपाईं पनि छक्क पर्नु हुनेछ ! access_timeफागुन १९, २०७६
T.F.M. को अर्थ कतिपय नुहाउने साबुनहरुमा T.F.M. लेखिएको पाइन्छ । के तपाईंलाई थाहा छ– यसको अर्थ के हो ? वास्तवमा, T.F.M. को अर्थ हो– Total Fatty Matter । यसले त्यस साबुनमा कति प्रतिशत चिल्लो पदार्थ राखिएको छ भन्ने कुर...
कुन प्राणीले कति मसिनो सुन्न सक्छ ? access_timeमाघ १६, २०७६
मान्छेको कानले कम्तिमा ३० हर्ज तरंगको मसिनो आवाजलाई सुन्न सक्छ । त्यसैगरी, मान्छेले अधिकतम २० हजार हर्ज तरंगको आवाज सुन्न सक्छ । त्यो भन्दा माथिल्लो तरंगको आवाज यति सानो हुन्छ कि त्यसलाई मान्छेको कानले सुन्न सक्दैन । तर कतिपय जनवारहरुले त्योभन्दा माथिल्ल...
बलवान तर अत्यन्त्यै ‘अल्छे’ सिंह access_timeपुस २९, २०७६
जंगलको सबैभन्दा बलवान जनावर सिंहलाई मानिन्छ । समूहमा बस्ने सिंह वास्तवमा नै अति शक्तिशाली जीव हो । उस्तै परे यसले जमीनका सबैभन्दा ठूलो प्राणी हात्तीलाई नै पनि मार्न सक्छ । तर यति बलियो जीव आफैं भने अति अल्छे हुन्छ । वास्तवमा, यसको शरीरको तुलनाम...
एक जोडी कुकुरको रेखदेख गर्ने कामदारलाई वार्षिक ४७ लाख तलब ! access_timeमंसिर १४, २०७६
लन्डन । बेलायतमा एक दम्पतीले अनौठो विज्ञापन प्रकाशित गरेका छन् । उनीहरुले आफूसँग रहेको एक जोडी कुकुर रेखदेखका लागि आकर्षक तलब र विविध सुविधासहित एक जना घरेलु कामदार माग गरेका हुन् । नाइटब्रिज निवासी उनीहरुले अनलाइन विज्ञापनमा त्यस्तो कामदारका लागि वार्षिक ३२ हज...
पुल बनाएर खोला तर्ने, सिंगो गैंडा पनि खाइदिने डरलाग्दो कमिला access_timeजेठ १, २०७६
पुल बनाएर खोला पार गर्ने कमिला ! कमिलाको एउटा यस्तो जाति पनि हुन्छ, जसले पुल बनाएर खोलासमेत पार गर्छ ! एउटा मरेको सिंगो गैंडालाई नै तीन दिनभन्दा पनि कम समयमा सफाचट पारिदिने कमिलाको प्रजाति पनि हुन्छ ! –यो कुरा सुन्दा तपाईं हामीलाई अचम्म लाग्न सक्छ ...
जनवारले पनि कुरा बुझ्छन् ! access_timeमाघ १६, २०७५
हो, जनावरहरुले हामी मानिस जस्तै एक अकाले भनेको बुझ्ने गर्छन् । उनीहरु हामी जस्तो बोल्न भने अवश्य सक्दैनन् तर विशेष प्रकारको आवाज निकालेर वा संकेत प्रदान गरेर एक आपसमा कुरा गर्ने गर्छन् । हामी मानिसमा पनि सबै कुरा बोलेर वा शब्दको माध्यमबाट मात्र एक अर्का सँग कुर...
मानव शरीरका अनौठा केही कुरा access_timeमाघ १६, २०७५
मानिसको शरीरमा सधैं बृद्धि भइरहने रहने अंग कलेजो पनि हो। यदि दुर्घटना वा बिरामीको कारणले मानिसको कलेजो दुई तिहाई भाग फ्याँक्नु पर्यो भने पनि चिन्ता गर्नुपर्दैन । त्यो चार हप्ताको समयमा नै फेरि पहिलेकै जस्तो आकारमा बढ्न सक्छ । यदि एउटा मान्छे ६२ के.जी.को छ भने, उस...
हाम्रो छाला कति बाक्लो हुन्छ ? access_timeमाघ १५, २०७५
छाला हाम्रो शरीरको सबैभन्दा बाहिरी भाग हो । यसका दुई तहहरु हुन्छन्– डर्मिस र इपिडर्मिस । हाम्रो आँखाले देखिने छालाको भागलाई इपिडर्मिस भनिन्छ । यो बलिया कोषहरुबाट बनेको हुन्छ । पुरानो भएपछि छालाको यो भाग मर्छ । त्यसरी मरेको कोषहरुको ठाउँमा नयाँ कोषहरु पलाउने ...
सबैभन्दा अचम्मको वस्तु मस्तिष्क access_timeमाघ १५, २०७५
ब्रम्हाण्डकै सबैभन्दा अचम्मको वस्तु के हो ? प्रश्नको जवाफ धेरै हुन सक्छ । तर केही केही वैज्ञानिकहरु चाहिँ हाम्रो मस्तिष्कलाई नै संसारकै सबैभन्दा अचम्मको चीज मान्ने गर्छन् । उनीहरुका अनुसार, टाढा टाढा ब्रम्हाण्डका धेरै कुराहरु पत्ता लगाउने मानिसले अझै मानिसको मस्तिष्क...